1. ပအိုးဝျတိုငျးရငျးသားတို့၏ကလေးကဗြာ - မောငျခှနျနှယျ(​အငျးလေး)
... အိုးစည်သံ - မောင်ခွန်နွယ်(အင်းလေး) ပအိုဝ်းတို့၏ကန်တော့ခိုဗန်တန်ဓလေ့ - မောင်ခွန်နွယ်(အင်းလေး) ကိုလိုနီခေတ် ရှမ်းပြည်သူတို့အား နိုင်ငံရေးမျက်စိ ဖွင့်ပေးခဲ့သော ပအို့ဝ်အမျိုးသား သထုံ(ဆီဆိုင်)စော်ဘွား စ၀်ခွန်ကြည် ...
2. တောငျရိုးတို့ ပြျောတဲ့ပှဲ - လေးမွငျ့
eBook file size: 84.8 KB ebook pages:7Publication: ၁၉၇၇ ခုနှဈ၊ မလေ၊ အတှဲ ၂၅၊ အမှတျ ၇ ထုတျ မွဝတီမဂ်ဂဇငျးတှငျ ပါသော ဆောငျးပါး ဖွဈပါသညျ။ Download -Related Articles- အင်းလေးကို တစ်ခေါက် အရောက်လာလှည့်ကြပါ ...
3. ဖောငျတျောဦး ဘုရားသမိုငျး နှငျ့ သြှမျးပွညျ ရာဇဝငျအကဉျြးခြုပျ
... အင်းတော်ကြီး ရွှေမဉ္ဇူ ဂန္ထ၀င်ဘုရားသမိုင်းပေါင်းချုပ် အင်းလေးဝါကျွတ်ပွဲ - ရန်အောင် အင်းလေးကို တစ်ခေါက် အရောက်လာလှည့်ကြပါ - လေးမြင့် အင်းလေးအလှ အင်းလေး ရွှေဥဒေါင်းတောင်ဆရာတော်၏ထေရုပ္ပတ္တိ Inle and Inthas ...
4. ပအိုဝျးတို့၏ကနျတော့ခိုဗနျတနျဓလေ့ - မောငျခှနျနှယျ(အငျးလေး)
... အိုးစည်သံ - မောင်ခွန်နွယ်(အင်းလေး) ...
5. အင်းလေးဝါကျွတ်ပွဲ - ရန်အောင်
eBook file size: 337 KB ebook pages:7Publication: ၁၉၇၀-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လထုတ် သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- စာရေးဆရာကြီးရန်အောင်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ အင်းလေး ...
eBook file size: 36.9 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လထုတ် စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download
7. အင်းလေး ရွှေဥဒေါင်းတောင်ဆရာတော်၏ထေရုပ္ပတ္တိ
eBook file size: 172 KB ebook pages: 20 ပုံနှိပ်ခြင်း - ပထမအကြိမ်၊ ဧပြီလ၊ ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ စိန်ရတနာသန်းပုံနှိပ်တိုက်၊ ၃၀ လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ download